कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु « Farakkon
दाङमा कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । बबई गाउँपालिका वडा नं. ७ मठ्यौरी निवासी ३२ बर्षीय चुडामणि परियारको उनकै साथीहरुको कुटपिटबाट मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । मदिरा सेवनपछि भएको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका परियारको उपचारका क्रममा छिमेकी देश भारतको लखनउमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
युवतीलाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि कुटपिट
ईप्रका तुलसीपुरका अनुसार मृतक परियार पेशा ट्रयाक्टरका चालक थिए । कुटपिटमा संलग्नहरुमध्ये केही अटो चालक र कोही ज्याला मजदुरी गर्नेहरु हुन् । बैशाख ८ गते कागल डाँगीले आफ्नो कोठा सरेको उपलक्ष्यमा पार्टी दिएकी थिइन् । खानपिन डाँगीकै कोठामा चल्यो ।
उक्त पार्टीमा सल्यान कालिमाटी ५ काल्चे निवासी २४ बर्षीय थलबहादुर दमाई, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का १८ बर्षीय राज सुनार, तुलसीपुर ८ की ३५ बर्षीया बविता वली र सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नं. ८ डाँग्री घर भई हाल तुलसीपुर ५ मा बस्दै आएकी ऋतु रावतले सँगै बसेर मदिरा सेवन गरे । तर पार्टी दिने काजलले भने मदिरा सेवन गरेकी थिइनन् ।
त्यही क्रममा मृतक चूडामणि परियार पनि मातेको अवस्थामा त्यहाँ पुगे । केहीबेरमा काजोलको कोठाबाट सबै सकुशल निस्के । त्यसपछि उनीहरु बतिता वलीको दंगाली खाजा घरमा पुगे । त्यहाँ पनि मदिरा खान सुरु गरे । त्यही क्रममा मृतक परियारले ऋतु रावतलाई अपशब्द प्रयोग गरे । ‘भालु र रण्डी’ भने ।
त्यो शब्द सुने लगत्तै त्यहाँ विवाद सुरु भयो । त्यतिबेला बेलुका साढे ९ बजेको थियो । उनीहरु उक्त खाजा घरबाट निस्के । त्यसपछि एकाएक थलबहादुर दमाई र राज सुनारले परियारलाई ढुङ्गा र इट्टाले टाउकोमा आक्रमण गर्दै कुटपिट गरे । परियारलाई टाउकोलगायत शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोटपटक लाग्यो ।
तत्कालै उनलाई नजिकैको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर पु¥याइयो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा रेफर गरियो । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव भएन । त्यसपछि भारतको लखनउ रेफर गरियो । उपचारकै क्रममा परियारको बैशाख १० गते मृत्यु भयो ।
प्रहरीले भने ढिला गरी मात्रै त्यसवारे सूचना प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि प्रहरीले घटनामा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी कतव्र्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाएर अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएको छ । सबैलाई पक्राउ गरिए पनि कसुर अनुसार अदालतले सजाय तोक्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।